Just heli cusub iPhone, ama aad leedahay iPhone ah oo ku saabsan amarka? Waxaan u maleynayaa, badan tahay in aadan dooneynin inuu ka tago wax kasta oo ku saabsan hore Motorola. Nasiib darro, ma jirto wado si toos ah inuu kaa caawiyo inaad files ka Motorola wareejiyo iPhone, marka la tixgelinayo OS kala duwan ee telefoonka. Waa in aad taageero ka ah qalab xisbiga saddexaad isku aadka, sida ay Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac . Sida a si gaar ah loogu tala galay Motorola si iPhone qalab kala iibsiga, waxaa ku caawinaysa in lagu wareejiyo music, video, SMS, sawiro iyo xiriirada ka Motorola si iPhone 1 click.
Motorola wareejiyo iPhone ka kaaftoomi si xor ah
Xiriirada Transfer ka Motorola si iPhone (macruufka 9 taageeray), iyadoo horyaalka shaqo, cinwaanka email iyo in ka badan info.
La jaan qaada iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone 6, iPhone 5s, 5c iPhone, iPhone 5, Motorola Moto X, Motorola Droid RAZR, iyo in ka badan .
Qalabka Motorola si iPhone kala iibsiga u saamaxaaya in ay u gudbiyaan xiriirada, video, sawiro, muusig iyo SMS ka Motorola si iPhone effortlessly.
100% wareejinta xogta iyo dhammaan faylasha in aad wareejiso gebi ahaan la mid yihiin mid ka mid ah asalka ah.
Waxaa si fiican u la shaqeysaa Motorola, iPhone, Samsung, HTC, iPad, iPod taabto, LG, Sony, ZTE, Acer, Huawei, iwm
Qaybta 1. Si toos ah Suuqa Content ka Motorola si iPhone
Qaybta 2. Soo Celinta iPhone ka Motorola ee kaabta File
Waxa la og
1. Waxyaabaha aad u baahan tahay: A phone Motorola, iPhone ah, laba USB fiilooyinka, kombiyuutar, ee Wondershare MobileTrans 2. Xiriirada Transfer ee koontada: Calaamad ku xisaab aad ku badbaadi xiriirada aad Motorola. Markaas, MobileTrans aad u wareejiyo doonaa iPhone. 3. Ku rakib Lugood: U hubso in Lugood la geliyo ka hor inta files ka Motorola gudbaayo iPhone.
Tallaabada 1. Run Motorola ay u iPhone Transfer Tool
First of dhan, rakibi oo ay maamulaan Wondershare MobileTrans ee kombiyuutarka. Si aad u kala iibsiga Motorola si iPhone, waa in aad doorato telefoonka in hab Phone oo guji Start .
Tallaabada 2. hesho Motorola iyo iPhone Connected
Connect telefoonka Motorola iyo iPhone in computer la fiilooyinka USB. Wondershare MobileTrans Ayaa isla markiiba lagu ogaan doonaan iyaga oo ka dibna u soo bandhigaan furmo.
Tallaabada 3. Transfer Xiriirada, Calendar, SMS, Video, Photos oo ka Motorola Music inay iPhone
Ka dib markii dooranin files doonayo, waxaad riixi kartaa Start Copy . Waxaad arki doontaa wax wada hadal pop-up ah, taas oo kuu sheegayaa boqolkiiba bar horumarka. Marka hanaanka wareejinta la soo gabagabeeyo, riix OK .
Qaybta 2. Soo Celinta iPhone ka kaabta ah File Motorola
Ma ahan lagama maarmaan in labada Motorola telefoonka iPhone iyo gacanta isku mar. Waxaad sameyn kartaa in gurmad aad Motorola on PC Windows hore iyo celin doonaa iPhone waqti kasta.
Tallaabada 1. Orod Wondershare MobileTrans ku PC Windows ah
Si aad u bilaabaan oo leh, ordo Wondershare MobileTrans ku computer Windows ah. In ay suuqa kala hoose, Back Up hab Your Phone doortaan.
Tallaabada 2. kaabta Your Motorola in PC Windows ah
Connect telefoonka Motorola in PC Windows via cable USB ah. Waxaa dhowaan la ogaan doonaa oo muujiyay bidixda.
Sidaa daraadeed, awoodo aad gurmad barnaamijyadooda, xiriirada, jadwalka taariikhda, SMS, video, sawiro, abuse call oo music aad Motorola in PC Windows ah. Hubi content in aad rabto in aad gurmad iyo Riix bilow Copy . Marka aad ku dhameysan habka gurmad ah, aad barkinta kartaa telefoonka Motorola.
Tallaabada 3. Soo Celinta Your iPhone la Motorola ee kaabta File
Riix Back to Homepage iyo dooran Soo Celinta . Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPhone in PC Windows ah. Your iPhone oo loo aqoonsan doono oo soo bandhigay xaq. Tag dhanka bidix iyo dooran gurmad Motorola faylka.
Wondershare MobileTrans Wuxuu kuu ogol yahay in la soo celiyo music, video, jadwalka taariikhda, xiriirada, SMS iyo sawiro si iPhone. Hubi in waxa aad ku socoto si loo soo celiyo oo dibna riix Start Copy .
Haajiraan Data ka iPhone si iPhone
Nuqul Stuff ka Nokia si iPhone
Nuqul Music ka iPod si iPhone
Xogta laga Nokia wareejiyo Sony
> Resource > iPhone > SMS Sidee si ay u gudbiyaan, Xiriirada iyo More ka Motorola si iPhone